Ilay fanomezana tsara indrindra – FJKM Ambavahadimitafo Ilay fanomezana tsara indrindra |
Publié le 10 avril 2022 à 07:04
Alahady 10 aprily 2022, alahadin’ny sampan-drofia, natokana koa hitondrana am-bavaka koa ny Sampana Dorkasy.
Avy ao amin’ny Romana 8 : 31 – 39 no nitondrana ny hafatra ho antsika anio : 31Inona ary no holazaintsika ny amin’izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no hahatohitra antsika? 32Izay tsy niaro ny Zanani-lahy, fa natolony hamonjy antsika rehetra Izy, tsy homeny antsika miaraka aminy maimaimpoana koa va ny zavatra rehetra? 33Iza no hiampanga ny olom-boafidin’Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. 34Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin’ny maty koa ka mitoetra eo amin’ny tànana ankavanan’Andriamanitra ary mifona ho antsika. 35Iza no hahasaraka antsika amin’ny fitiavan’i Kristy? Fahoriana va, sa fahantrana, sa fanenjehana, sa mosary, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra? 36Araka ny voasoratra hoe:
« Fa noho ny aminao no namonoana anay mandrakariva
Toy ny ondry hovonoina no fijery anay’’ (Sal. 44.22). »
37Kanefa amin’izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin’ny alalan’Ilay tia antsika. 38Fa matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na ireo fanapahana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy, na hery, 39na ny ambony, na ny ambany, na inona na inona amin’izao zavatra ary rehetra izao, dia tsy hahasaraka antsika amin’ny fitiavan’Andriamanitra izay ao amin’i Kristy Jesosy Tompontsika.